Home Wararka Farmaajo oo qorshe ka dhana MW Deni ka bilaabay Magaalada Muqdisho
Waxaa magalaada Muqdisho ka bilaawday kulamo is xulufeysi siyaasadeed oo ay wadaan wasiirada iyo xildhibaanada Puntland ee kaga jira DFS. Waxaa kulamadaan qayb ka ah siyaasi Asad Cismaan Diyaano oo miisaan culus ku leh siyaasadda Puntland iyo dhinaca awooda ciidan ee Puntland, waana gogol xaar u ah ka hadalka arrimaha doorashooyinka iyo is-xulufeysi siyaasadeed oo ka dhan ah Saciid Deni.
Warar xog ogaal ah ayaa sheegaya in kulamadaasi looga hadlay sidii si wada jir ah ah la isaga kaashan lahaa arrimaha doorashooyinka heer xildhibaan iyo in la abuuro isbaheysi ka dhan ah madaxweynaha Puntland oo xusul duub ugu jira in doorashooyinka xildhibaanada labada aqal damacsan in ay kusoo baxaan xubno taabacsan.
Farmaajo ayaa qorshahiisu yahay in uu meel cidla soo istaajiyo madaxweyne Saciido Deni kaas oo uu arko in dagaal ku qaaday dowladiisa.
Previous articleDagaal dhexmaray ciidamada Puntland iyo Al Shabaab, deegano laga qabsaday Al Shabaab
Next articleXildhibaanno iyo Senatoro sameeyey Guddi qaabilsan xog ururinta iyo dabagalka Askarta ku maqan Eritrea
Haweeney Ingiriis ah oo lagu xayiray garoonka Muqdisho iyo xiisada ka...